WordPress Hosting သည်နှေးကွေးနေသလား။ စီမံခန့်ခွဲသော Hosting သို့ပြောင်းပါ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 6, 2020 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 27, 2020 Douglas Karr
သင်၏ WordPress ထည့်သွင်းမှုနှေးကွေးနေသည့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည် (နည်းပါးလွန်းသောရေးသားထားသော plugins များနှင့် themes များအပါအ ၀ င်) ရှိသော်ငြားလူအများစုပြproblemsနာတက်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာသူတို့၏ hosting ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ လူမှုရေးခလုတ်များနှင့်ပေါင်းစပ်မှုများအတွက်အပိုလိုအပ်ချက်ကဒီကိစ္စကိုပိုဆိုးစေသည် - သူတို့ထဲကအတော်များများလည်းအလွန်အမင်းနှေးကွေးသည်။
လူများသတိထားမိ သင့်ပရိသတ်ကိုသတိပြုပါ ထိုသူတို့ကပြောင်းလဲကြဘူး။ ၂ စက္ကန့်ထက်ပိုကြာသောစာမျက်နှာတစ်ခုရှိပါကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစွန့်ခွာသွားသည့် visitors ည့်သည်အရေအတွက်တိုးလာနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပိုဆိုးသည်ကသင်၏စျေးဝယ်လှည်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်သည်သင်၏မြန်နှုန်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
WordPress အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည် Flywheel နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်များကိုခဲ့ကြပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည် ၉၉.၉% နှင့်အထက်တသမတ်တည်းမြင့်တက်နေသည် (မရသောအခါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည်) ။ ၎င်းတို့တွင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုစီမံရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆိုဒ်များအားလုံးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အ ဦ များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိရိယာများအားလုံးရှိသည် -
၁ ကိုနှိပ်ပါ Restore - လွယ်ကူသော Snapshot Backups ဖြင့်ချက်ချင်းအရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ယူခြင်း
ကိုယ်စားလှယ်အသွင်အပြင် - ဖောက်သည်၏အကောင့်အတွင်းရှိဖောက်သည်များကိုစီမံနိုင်စွမ်း
အသေးစိတ်ပုံစံ - အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုတည်ဆောက်ရာတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးခြားပြင်ဆင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဆိုဒ်၏အခင်းအကျင်းနှင့်ပလပ်ဂင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။
cache - အကြီးစားအရွယ်အစားနှင့်အမြန်နှုန်းအတွက်သိုလှောင်ခြင်းနည်းပညာ။
CDN အဆင်သင့် - တည်ငြိမ်သောအကြောင်းအရာအတွက်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြန်ဆန်သောအချိန်။
ကိုယ်ပွား - ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူပုံဖော်နိုင်စွမ်း။
နေ့စဉ် Backups - သင်၏အရေးကြီးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုထောက်ပံ့ရန်အလိုအလျောက်စနစ်မလိုအပ်သောစနစ်များ။
firewall ကို - သင်၏အချက်အလက်နှင့်ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများအကြားတွင်အားကောင်းသည့် firewalls များစွာ။
malware ကိုစကင် - အန္တရာယ်ရှိသော malware များကိုကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း။
ထောက်ပံ့ - အမေရိကန်အခြေစိုက် WordPress ကျွမ်းကျင်သူများထံမှထူးခြားသောနည်းပညာအထောက်အပံ့။
အခမဲ့ SSL ကို - သင်၏ဆိုဒ်များအားလုံးတွင် SSL ကို Enable လုပ်ပါ။
စင် - ဇာတ်စင်withinရိယာအတွင်းရှိကိုယ်ပွားနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်၊
စီမံခန့်ခွဲသော WordPress Hosting ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဖောက်သည် ၅၀ ကျော်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးပါပြီ Flywheel WordPress ထည့်သွင်းမှု ၅၀ ထက်မနည်းသောအကွာအဝေးအားလုံးတွင်ပြည့်ဝစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်အားလုံးပြည့်စုံစွာမရှိတော့ပါ။ ပြီးတော့ Flywheel တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် WordPress မှအိမ်ရှင်အကြံပြုပါသည်!
အိုး, ငါ Flywheel က၎င်း၏ရှိပါတယ်ဖော်ပြခဲ့ဘူး ကိုယ်ပိုင်ရွှေ့ပြောင်းမှုပလပ်အင်?
ပြောင်းရွှေ့ဖို့အဓိကအကြောင်းရင်းများ Flywheel ပါဝင်:
WordPress ကိုပံ့ပိုးမှု - ကျွန်ုပ်တို့သည် Host များနှင့်စကားပြောခဲ့သည်ကို၎င်းတို့အား WordPress ကိုကူမပေးကြောင်းတိုက်ရိုက်အပြစ်တင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ (သူတို့ကတစ်ချက်နှိပ်ရုံသာတပ်ဆင်လေ့ရှိသော်လည်း) ခွင့်ပြုချက်ဆိုင်ရာပြissuesနာများ၊ အရန်ကူးခြင်းကိစ္စများ၊ လုံခြုံရေးပြ,နာများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများ ... သင်အမည်တပ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့က ၀ န်ထမ်းတိုင်း WordPress ကိုအပြစ်တင်ကြသည်။
အေဂျင်စီပံ့ပိုးမှု - ၎င်းသည်ဖောက်သည်သည်အကောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအသုံးပြုသူများ၊ တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးသူများနှင့်တရားဝင် FTP အသုံးပြုသူများအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားလျှင်သူတို့ဆက်လုပ်နိုင်သည် Flywheel နှင့်သူတို့၏အောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်။ ဖောက်သည်များကိုဓားစာခံအဖြစ်ထားခြင်း၊
Affiliate အခကြေးငွေ - ကျွန်ုပ်တို့ Flywheel နှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးချသည် Flywheel။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုငွေအနည်းငယ်ချွေတာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်ပွင့်လင်းရိုးသားစွာပြသပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်ငွေမတောင်းသောကြောင့်သူတို့လုံးဝသဘောမတူပါ။
ကိုယ်ပွား - ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုချောမွေ့စွာပုံတူကူးနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားနေရာများတွင်စင်မြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုကိုထားရှိပြီး၎င်းကိုအိမ်ရှင်ထံလွှဲပြောင်းရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ Flywheel ကျနော်တို့ဖောက်သည်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုပြသနိုင်ပါပြီ၊ login လုပ်ပါ၊ အဲဒါကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်ဖို့ယူသွားပါမယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုခလုတ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံနဲ့တိုက်ရိုက်တွန်းနိုင်မှာပါ။
Backup တွေကို - အလိုအလျောက် (သို့) တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာဖောက်သည်တစ်ယောက်ရှိပြီးတတိယပါတီပေါင်းစည်းမှုကိုစမ်းသပ်နေတယ်။ တတိယပါတီကသူတို့အသက်ရှင်ဖို့သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်၊ ငါတို့အသက်ရှင်မယ်၊ အရင်ကဆိုဒ်ကိုသူတို့လိုအပ်ချက်အတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများပြေလည်သွားသည်အထိကျွန်တော်တို့ဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
performance - ခိုင်မာသောကျောက်တုံးကျောက်ခဲများနှင့်အလွန်များပြားသောပါဝင်မှုများဖြန့်ဝေသောကွန်ယက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကောင်းစွာလည်ပတ်စေသည်။ မြန်ဆန်သောဆိုဒ်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းမက်ထရစ်များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုပင်တိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်စရာမလိုသောအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
WP Cache - Flywheel ၏ cache အင်ဂျင်အပြင်၎င်းတို့သည်အပြည့်အဝထောက်ခံသည် WP Cache နှင့် WP Rocket ပလပ်ဂင်။ ပျင်းရိခြင်း၊ စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် Pre-cache စွမ်းရည်တို့ပါဝင်သည်။ ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်ပါတယ်။
WordPress ကိုလုံခြုံရေး - ကြံ့ခိုင်သော hacking နည်းများသည် WordPress ဗားရှင်းဟောင်းများသို့မဟုတ်ဆိုးဝါးစွာရေးသားထားသော themes များနှင့် plugins များကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Flywheel အခြားလူများ၏ဖောက်သည်များဆက်ပြီးဟက်ခံရသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်သင်၏ဗားရှင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသင့်ဆိုဒ်အားထိခိုက်လွယ်မှုမရှိကြောင်းသေချာစေသည်။ သစ်သားကိုခေါက်တော့ငါတို့မှာပြneverနာမရှိဘူး။ ငါတို့သည်ထိုချစ်ကြတယ် Flywheel အတည်ပြုပြီးသောလုံခြုံရေးအန္တရာယ်ရှိပါကဗားရှင်းများအားအဆင့်မြှင့်တင်မည်။
စင် - Flywheel သင်၏ဆိုဒ်များထဲမှမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၎င်းတို့ကို enable လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီးသင့် site ကိုစင်မြင့်toရိယာသို့ကူးယူရန်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော site ကို update လုပ်ရန်နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါအသက်ရှင်ရန်၎င်းကိုပြန်တွန်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသုံးချနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သူတို့၏ဆိုဒ်သို့ထူးခြားသောမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်ရှာဖွေနေသူမည်သူမဆိုအတွက်လိုအပ်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် Flywheel Local လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ကျက် application ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းက developer တွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်
တည်းဖြတ်မှုပြုပါ။ သင်၏ client ကို demo URL ဖြင့်ပြပါ
ရန် Publish Flywheel နောက်ထပ်ကလစ်တစ်ချက်တည်းသာ (နှင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်)
ကျနော်တို့က၏အကူအညီရှိခဲ့ပါတယ် Flywheel ပြီးသားပြissuesနာများ၏အရေအတွက်အင်ဂျင်နီယာများ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆိုဒ်များကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူတို့၏အဖွဲ့သည်ပြidentifyနာ (ပုံမှန်အားဖြင့်ပလပ်အင်တစ်ခု) ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ၄ င်းတို့အဖွဲ့အားလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိသော ၄ င်းတို့၏အဖွဲ့ (နှင့်အင်တာဖေ့စ်) ကကျွန်ုပ်တို့အားပြootနာဖြေရှင်းရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ၂ စက္ကန့်မပြည့်သောအခြား host များပေါ်တွင်တင်ရန် ၁၀ စက္ကန့်ကြာသောဆိုဒ်များရှိသည် Flywheel.
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုကိုအခြားအေဂျင်စီများနှင့်မျှဝေပြီးပါကသူတို့ဖောက်သည်များအားလုံးသို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည် Flywheel။ WordPress နှင့်တစ်မူထူးခြားသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသင်၏ဖောက်သည်များအားအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ယူခွင့်ပေးပြီးသင်၏အသင်းကိုအခွင့်အာဏာရှိသောအသုံးပြုသူများအနေနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်စားထောက်ခံမှုတောင်းခံရန်နှင့်သုံးစွဲသူနှင့် SFTP ဆက်သွယ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသည် - client သည်အကောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်နေစဉ်။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များသင်၏ Affiliate ကုဒ်ပေးပါ Flywheel တောင်မှလိမ့်မယ် မင်းကိုပေး.
ရရှိလာတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုကခုန်နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးစာမျက်နှာကိုအချိန်တိုးချဲ့ပေးတယ်၊ ပြီးတော့စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းတိုးတက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မြင်သာမှုကိုရရှိစေတယ်။ အိုး ... ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီ post မှာပါတဲ့ link တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်ချိတ်ဆက် link တွေပါ။
အခြား WordPress စီမံခန့်ခွဲသော Hosting Provider များ
WordPress ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်လူကြိုက်များသည်။ တူညီသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အခြားကြီးမားသောအိမ်ရှင်အချို့ရှိပါသည်၊ ၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။
WPEngine - ယခု Flywheel ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ WPEngine တွင်အရင်းအမြစ်များမျှဝေထားသော်လည်းထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောတစ်ခုမှာလိုက်နာမှုအတွက်အသုံးပြုရန်မှတ်တမ်းဖိုင်များကိုအလိုအလျှောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Kinsta - သူတို့၏မယုံနိုင်လောက်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကြီးမားသောလှိုင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အချို့အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်တဲ့ဆိုဒ်များကို run သည်။
Tags: wpengine မှအခြားရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံး hostingflywheelဒေသခံ flywheelအခမဲ့ sslပျင်းရိသောဝန်ဒေသခံ wordpress ဖှံ့ဖွိုးတိုးတwordpress hosting ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်WordPresswordpress backups များwordpress cache ကိုwordpress CDDwordpress ဒေတာဘေ့စ optimizationwordpress ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုwordpress firewall ပါwordpress ကို hostingwordpress malwarewordpress sslwordpress ဇာတ်စင်wordpress ထောက်ခံမှုwpcachewpenginewpengine hosting
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 14
သူတို့ကိုငါစစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ သို့သော်ဤလက်ခံထားသော WordPress ဆိုင်များအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယေဘူယျပြproblemနာကသင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ websiteရာမ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကြီးတစ်ခုဖွင့်ထားခြင်းက plugins များနှင့် database access များအပါအ ၀ င်ရှုထောင့်တိုင်းကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းအစုအဝေးတွေကလည်းတကယ်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ 100k pageviews နဲ့ 250gb အတွက် $ 100 / month? ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အထိအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ လက်ရှိငါ Media Temple ကိုအသုံးပြုနေသည် (၎င်းအတွက်အများကြီးပေးဆပ်နေတယ်) - 'optimization' tool တိုင်း (cahcing, CDN, etc) ကိုသုံးတယ်။ အချိန် ၉-၁၀ စက္ကန့်ထက်ပိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါကြိုးစားနေသည်မှာ WordPress မြန်ဆန်စွာပြေးလာရန်ငွေကျည်ဆံမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါကြိုးစားခဲ့ပြီ
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 25
သူတို့နဲ့အတူရှုထောင့်တိုင်းကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသောအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်များစွာသောပလပ်ဂင်များရှိသည်။ ငါစျေးနှုန်းသည်ပျမ်းမျှကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်အတွက်တော်တော်လေးကောင်းသည်ဟုယုံကြည်သည်။ ပျမ်းမျှလူတစ် ဦး သည် CDN နှင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုမသိသောကြောင့်၎င်းသည်ထိုကုန်ကျစရိတ်အောက်ကျသည်။ BTW: ကျွန်ုပ်တို့သည် Mediatemple ကိုလည်း CDN ​​နှင့် Cloudflare ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။
14:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 29 မှာ
သင်သည် WordPress ဆိုဒ်ကို Media Temple ၏ဇယားကွက်ဆာဗာသို့မဟုတ်သီးသန့် virtual server ပေါ်တွင် hosting လား။ ငါဇယားကွက်ပေါ်တွင် (၂) နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုဒ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဝန်ထုပ်များသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နှေးကွေးပြီးအက်မင်areaရိယာသည်မြည်းထဲ၌ပင်နာကြည်းဖွယ်နာကျင်မှုဖြစ်သည်။ ငါအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးလုံးဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခဲ့ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား
ကျွန်ုပ်သည်ကွန်တိန်နာ ၀ ယ်ယူခြင်းမှအပဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘဲမှသာကျွန်ုပ်နေ ၀ င်သည့်နေရာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေရောင်အောက်တွင်လုပ်ခဲ့သည်။ Minify, WP Super Cache စသည်တို့ဖြင့်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြား wp hosted site တွင် CloudFlare ကိုပင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပင်မစာမျက်နှာကိုတင်ရန်စက္ကန့် ၂၀ လောက်?
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို Hostgator သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးအမြန်နှုန်းတိုးခြင်းသည်တစ်ညတည်းသုံးဆဖြစ်သည်။ ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သော (mt) ထိန်းချုပ်မှု panel ကိုလက်လွတ်နေဆဲပေမယ့်ငါ့ site ၏မြန်နှုန်းကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ interface ကို trumps ။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ဝယ်ယူတော့မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုတစ်ကြိမ်တွင်၎င်းအတွင်းမှ micro sites ၁၀ ခုကိုလက်ခံနိုင်သည့် multisite ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငါ (mt) ဆက်ကပ်အပ်နှံ virtual, WP အင်ဂျင်နှင့် Page.ly. ကြည့်ရှုခဲ့ကြ Media Temple ဟာပိုကောင်းတဲ့အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်။ သူတို့ကိုငါ Grid ပေါ်မှာမီးရှို့ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့တပ်ဆင်ထားတဲ့ virtual ကငါ့ကိုငါလိုအပ်တဲ့အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သလား၊ သူတို့ရဲ့ control panel များနှင့်အတူအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းရှိလား။
14:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 09 မှာ
WordPress အတွက်မည်သည့်အထောက်အပံ့မှမပါသောစက်ကိုသင်လိုချင်လျှင် MT သည်“ သဘောတူညီမှု” တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုံခြုံရေးကိုလုပ်လိုလျှင်၊ မြန်အောင်ပြုလုပ်ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင် CDN တစ်ခုပြုလုပ်ပါ (၎င်းအတွက်ပေးချေပါ) ။
ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ရရှိမှုရှိပါတယ်။ ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာပြissuesနာများကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးသည်ဆာဗာတစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းသည်စပျစ်သီးပြွတ်ကဲ့သို့အလွန်အမင်းမရရှိနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အရ $ 20 / mo ချွေတာရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ထိုအရာအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်မှာအချိန်သို့မဟုတ်ငွေကိုအသုံးမကျပါ။ ငါတို့အတွက်ပိုလွယ်သည်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအားလုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုငါတို့ amortize လုပ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် TechCrunch မဟုတ်လျှင်ဆိုက်တစ်ခုတည်းကိုလုပ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
14:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 38 မှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jason ။ သင်၏ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ကိုးကားရန်အချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်ရိုက်ကူးနေသည်။
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 17
ဟိုင်းဂျိုနသန်၊ ခင်ဗျားဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကိုမစမ်းကြည့်ရင်မင်းဒါတွေကိုမစမ်းသေးဘူး။ 🙂
ထိုကန့်သတ်ချက်များသည်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည် - သင်၏ဆိုက်ကိုသို့မဟုတ်သင်ထိမှန်ပါကမည်သည့်အရာကိုမဆိုပိတ်ထားမည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုကုန်ကျပြီးသင့်အတွက်ပိုမိုကုန်ကျမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာလူအတော်များများရှိခဲ့ဖူးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးအကောင်းမြင်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Plugins များ၊ စိတ်ကြိုက်ကုဒ်များနှင့်ဒေတာဘေ့စ်များကို ၀ င်ရောက်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုလည်းသင့်အားပေးသည်။
မင်းတို့ဘလော့ဂ်ကိုကူးထည့်ပြီးရင်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ (jason at wpengine) ပြီးတော့ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
9:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 42
၉-၁၀ စက္ကန့်ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ်သည် Thesis မှ Woo Framework သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ site ကိုသိသိသာသာနှေးကွေးစေခဲ့သည်။ ငါ9စက္ကန့်မှာ loading ခဲ့သည်နှင့်ယခု၎င်း၏လမ်းနှေးကွေး။
ငါ VPS ဟာမျှဝေခံထားရတဲ့ hosting ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်၊ ကျနော့်အမြင်မှာအခက်ခဲဆုံး၊ ဈေးကြီးတဲ့ဆိုဒ်များစွာကို MT သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။
VPS ကို cPanel ဖြင့်တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ဒေါ်လာနှင့်နှစ်စဉ်အထုပ်များအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ Plesk နှင့် VPS အတွက်စျေးသက်သာသည်
1:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 52
မင်္ဂလာပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုခြင်းကိုသဘောမထားပါက၊ “ တစ်လလျှင် USD ၃၅ ဒေါ်လာဖြင့် cPanel နှင့် VPS ပါသော VPS” ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရရှိသနည်း။
အဲမှာ MT လား? သင်သည်ထိုနေရာများစွာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟုသင်ပြောသော်လည်းသူတို့၏ gimmick ကားအဘယ်နည်း။ သူတို့နှင့်သင်ပျော်ရွှင်ပါသလား
သြဂုတ် 26, 2011 မှာ 11: 08 AM
အမည်မဖော်လိုသူ, ငါသည်ဤရှေးရှေးအတော်လေးနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားကြသည်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာသင့်တွင် SFTP ဆက်သွယ်မှုရှိသည်၊ သို့မှသာသင်ပလပ်အင်ဘက်မှသင်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ဖိုင်အပြည့်အ ၀ ရရှိနိုင်သောကြောင့်သင်ဒေတာဘေ့စ်နှင့်သင်လုပ်ချင်သမျှကိုလုပ်နိုင်သည်။ ငါသည်လည်း MediaTemple တွင်ရှိသည်။ ငါ cache နှင့် CDN ကိုအသုံးချသည်။ သို့သော်သင်နှင့်ငါသည်ရှားရှားပါးပါးမျိုးရိုးဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်နားမလည်ပါက WP Engine သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ပျမ်းမျှကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်ဂါလိုအပ်သောအရာများ၏စာမျက်နှာပြသမှုနှင့် bandwidth တို့ထက်များစွာသာလွန်သည်။ သင်၏ site ကိုအကောင်းဆုံးနှင့် CDN တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းလိုလျှင်၎င်းသည်များစွာကုန်ကျနိုင်သည်။
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 01
ကောင်းသောသခင်သင့်ရဲ့ website ကိုအစာရှောင်ခြင်းဝန်။
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 14
မဟုတ်သေး - သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 16
တကယ်လား မင်းပြောင်းပြီးပြီလို့ငါထင်တယ် မရလျှင်, သင်ကမြန်နှုန်းနှင့်အတူတော်တော်လေးကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်။
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 22
ငါ Cloudflare ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး Mediatemple ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ hosting server များမှဝန်ပိခြင်းကိုအတော်လေးသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်အမြန်ဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအလုံးစုံသောအမြန်နှုန်းသည်တိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
26:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 50
ကောင်းပါတယ် ငါသူတို့ကိုထွက်စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။ ထူးဆန်းတာကကျွန်တော် WPEngine ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာကအမြန်နှုန်းဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ဖြူးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ 1-click ဇာတ်စင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါဘယ်လောက်ချိုတာလဲ
28:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 40
Jason Cohen နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးသည်ရွှေဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ ငါသည်သူ၏ CodeCollaborator တစ်ကိုယ်တည်းအဖွဲ့ဖြစ် LOL ဖြစ်ရန်တစ်ခါမျှမလိုအပ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးသူ့အတွေးအခေါ်ကိုနှစ်နှစ်ကျော်လေ့လာနေတယ်။
သူ WP အင်ဂျင်အကြောင်းသူရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူကအခါအားလျော်စွာ retweets ဒီတော့ငါယနေ့ပေါ်လာပုံကိုပါပဲ။
ဖြစ်ချင်တော့၊ ငါ WP Engine အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမယ့် CloudFlare ကိုငါကြည့်နေ ဦး မှာပဲ။
14:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 33 မှာ
ဒီစကားဝိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ - ငါဟာ Anglotopia.net အတွက် hosting ကို Wpengine သို့ပြောင်းလိုက်ပြီးငါ့ site ကတော်တော်မြန်မြန်ပြေးနေသည်။ MT server ကိုငါအချို့သောဆိုဒ်များအတွက်ဝန်တင်ချိန်သည်ပြanနာမဟုတ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင် Anglotopia ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။
26:2012 pm မှာဇွန် 4, 45
တစ်ခုတည်းသော site အတွက်အရမ်းစျေးကြီးတယ် ငါအစားစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ VPS အဘို့အသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် xcache ကဲ့သို့အကန့်အသတ်မဲ့ဒိုမိန်းများနှင့် cache စနစ်များရှိသည်။